तपाईंले हार्ट महिना चुनौती पदक देख्नुभएन? यसलाई कसरी समाधान गर्ने म म्याकबाट हुँ
तपाईंले हार्ट महिना चुनौती पदक देख्नुभएन? यसलाई कसरी समाधान गर्ने
एप्पल वाच उपयोगकर्ताहरु जसले हार्ट मासिक चुनौती लिए उनीहरूको पुरस्कार लॉकरमा पदक नहुन सक्छ र यो सामान्य त्रुटि जस्तो देखिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले चुनौतीलाई यसबाट टाढासम्म हासिल गरेका छैनन्, केवल यो कि यो प्रतिबिम्बित भएको छैन र आज हामी यसलाई कसरी देखापर्ने भनेर हेर्नेछौं।
यस केसमा, हामीले हेरेका थियौं कि हजारौं प्रयोगकर्ताहरूले मेडल देखेका छैनन् उनीहरूको घडीमा र न त आईफोनमा, त्यसैले केहि बारेमा सोधपुछ गर्दा हामीले महसुस गर्यौं कि हाम्रो उपलब्धि प्रतिबिम्बित गर्न को लागी समाधान धेरै सरल छ तपाईले स्पष्ट रुपमा गतिविधि गर्नु भएको कुरा निश्चित छ।
एक समयमै पुनःस्टार्ट सधैं स्वागत छ ...
यो उपलब्धि फिटनेस अनुप्रयोग भित्र तपाईंको पदक बक्स मा प्रतिबिम्बित गर्न को लागी एप्पल वाच को एक रीसेट प्रदर्शन। यससँग, पदक तपाईंको घडीमा देखा पर्नेछ र तपाईं सन्देश अनुप्रयोगमा वा बाँकी सन्देश अनुप्रयोगहरूमा स्टिकरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले यस परिस्थिति अघि कहिल्यै सामना गरेको छैन र यस्तो देखिन्छ कि यो एक व्यापक असफलता थियो। हिजो फेब्रुअरी १ ​​14 थियो र धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यस लक्ष्य हासिल गर्न activity० मिनेट वा अधिकको लागि शारीरिक गतिविधि अभ्यास गरेर हार्ट महिनाको चुनौती लिए। आज धेरैले किन उनीहरूले अझै पनि यस चुनौतीलाई प्रतिबिम्बित भएको नदेख्नुको कारणको बारेमा सोच्दै थिए र अब यस घडीको पुनःसेटको साथ देखा पर्दछ जुन पहिले नै देखा पर्दछ। व्यक्तिगत रूपमा मैले यो समस्या पहिले कहिल्यै सामना गरेको छैन तर उपकरणहरूको समयमै रिबुट सधैं राम्रो हुन्छ ...
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » तपाईंले हार्ट महिना चुनौती पदक देख्नुभएन? यसलाई कसरी समाधान गर्ने
एप्पल टिभीको लागि टम हल्यान्डको चेरी फिल्मको लागि नयाँ ट्रेलर
स्टीव जॉब्सले भरिएको रोजगार प्रश्नावली लिलामीमा जान्छ